eatigo အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
3.9 | 1,000,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် XAPK（11.4MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် eatigo – discounted restaurant reservations
Eatigo သည်စားသောက်ဆိုင်ကြိုတင်မှာကြားထားသည့် app တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၄၅၀၀ ကျော်သောစားသောက်ဆိုင်များတွင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ၅၀% လျှော့စျေးလျှော့စျေးပေးထားသည်။ ကြိုတင်ပေးငွေသို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်ကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။ eatigo 100% အခမဲ့ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုရန်ရိုးရှင်းပါသည်၊ ရှာဖွေခြင်း၊
ထိုင်း၊ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ဟောင်ကောင်၊ အိန္ဒိယ၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့တွင်ရရှိနိုင်သည့်စားသောက်ကုန်များသည်စားနပ်ရိက္ခာပေါင်း ၅ သန်းကျော်ကိုဒေသတစ်လွှား၌နေရာယူထားပြီးအရှေ့တောင်အာရှတွင်နံပါတ်တစ်နေရာတွင်ရှိသည်။ 1 စားသောက်ဆိုင်ကြိုတင်မှာကြားထား app ကို။
ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်ရှိဟိုတယ်နေရာများမှစားသောက်ဆိုင် ၄၅၀၀ ကျော်၏ကျယ်ပြန့်သောစာရင်းကိုခံစားကြည့်ပါ။ Michelin သည်စားသောက်ဆိုင်များကိုလူကြိုက်များသောစားသောက်ကုန်များနှင့်အသေးစားစားသောက်ဆိုင်များသို့အကြံပြုသည်။ Eatigo သည်အမျိုးမျိုးသောအစားအစာများနှင့်စျေးနှုန်းများကိုလျှော့စျေး ၅၀% အထိလျှော့ချနိုင်သည်။
အဆင့် ၃ ဆင့်ဖြင့်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းပါ။
1 ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်ထားသည့်အမျိုးအစားများ၊ ထိပ်တန်းနှင့်စားသောက်ဆိုင်အသစ်များရှိစားသောက်ဆိုင်များကိုရှာဖွေပါသို့မဟုတ်အနီးအနားရှိစားသောက်ဆိုင်များကိုကြည့်ရှုရန် 'ဤနေရာနှင့်ယခု' အင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုပါသို့မဟုတ်သင်ရှာနေသည့်စားသောက်ဆိုင်ကိုရိုးရိုးလေးရှာဖွေပါ။
2 သင်စားသောက်ချင်သောစားသောက်ဆိုင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ အချိန်၊ ရက်စွဲနှင့်လျှော့စျေးကိုရွေးချယ်ပြီးသင်၏ကြိုတင်စာရင်းသွင်းမှုကိုအတည်ပြုပါ။ အက်ပ်၊ အီးမေးလ်နှင့် sms များမှတဆင့်ချက်ချင်းကြိုတင်ဘွတ်ကင်ကိုအတည်ပြုပေးလိမ့်မည်။
1 ။ စားသောက်ဆိုင်သို့အချိန်မီရောက်ပြီးဘွတ်ကင်နံပါတ်ကိုဒီဂျစ်တယ်ဖြင့်ပြပါ။2မီနူးမှမည်သည့်အစားအစာကိုမဆိုမှာယူပြီးလျှော့စျေးကိုခံစားပါ (အချိုရည်များကိုစားနပ်ရိက္ခာလျှော့စျေးမှထုတ်ယူထားသည်) ။
3 ။ အလိုအလျောက်နုတ်ယူပြီးသားငွေတောင်းခံလွှာကိုပေးဆောင်ပါ။
၎င်းသည် ၁၀၀% အခမဲ့ဖြစ်ပြီး၊ ခရက်ဒစ်ကဒ်အချက်အလက်လိုအပ်ချက်မရှိပါ။ မီနူးများ၊ အကြံပြုချက်များ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်မည်သို့သွားရမည့်စသည့် app ပေါ်တွင်သင်လိုအပ်သည့်စားသောက်ဆိုင်အချက်အလက်အားလုံးကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဂျပန်၊ ဆူရှီ၊ ပီဇာ၊ ကဖေး၊ ဘာဂါ၊ ဟော့ပေါ့၊ All-You-Can စား၊ ဟိုတယ်ဘူဖေးနှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့သောအစားအစာအမျိုးအစား ၂၀ ကျော်မှရွေးချယ်ပါ။
ဘန်ကောက် - Godiva, Kyochon, Chu ချောကလက်ဘား၊ Outback Steakhouse၊ ဂျေမီ၏အီတလီ၊ Feast @ Royal Orchid Sheraton, Atelier @ Pullman, River Café Terrace @ The Peninsula
စင်ကာပူ - Morganfield's, Crystal Jade Kitchen,
ကွာလာလမ်ပူ - Lemon Garden @ Shangri-La၊ သစ်ကြံပိုးကော်ဖီအိမ် @ One World ဟိုတယ်၊ The Mill Café @ Grand Millennium, Rocku Yakiniku, Yoogane Dak Galbi
ဟောင်ကောင် - The Continental, JW Café @ JW Marriott ဟိုတယ်ဟောင်ကောင်၊ PizzaExpress, YumCha
မွန်ဘိုင်း - Mezzo Veg Lounge၊ Angrezi Dhaba လက်ကား Theka @ Nakshatra Mall Dadar
Pune - Aufside၊ Barbeque ကျေးရွာ၊ Falak၊ ကဖေး ၁၇၃၀၊ ရှစ်ဆယ့်ရှစ် @ Hyatt, TJ ၏ Brew Works -
ဖိလစ်ပိုင် - အပူ @ Edsa Shangri-la, The Pantry @ Dusit Thani Manila, The Café @ Hy Banen Mi မီးဖိုချောင်
ဂျကာတာ - Gyu-Kaku Prime @ Plaza Indonesia, Pasola @ The Ritz-Carlton Pacific Place, Lewis & Carroll @ Blok M, City of Dreams၊ Ramen Nagi, Barcino၊ ပန်ကိတ်အိမ်၊ VENGO၊ Le Gran Cafe @ Gran Mahakam, Ramen 38 Sanpachi, Amigos, Seorae, Hong Tang, Amigos Bar & Cantina, Sunny Side Up Up
- အပေါ်အခြေခံပြီးအကောင်းဆုံးအပေးအယူများကိုရှာပါ သင့်တည်နေရာ၊ ရရှိနိုင်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်စုံသုံးရှာဖွေမှုကိရိယာနှင့်စိတ်ဝင်စားမှုများ - လူကြိုက်များမှုနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းပေါ် အခြေခံ၍ စားသောက်ဆိုင်များကိုရှာဖွေပါ။ -“ ဤတွင်နှင့်ယခု” အင်္ဂါရပ်ဖြင့်သင့်အနီးအနားရှိစားသောက်ဆိုင်များနှင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီကမ်းလှမ်းမှုများကိုရှာဖွေပါ။ , ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်အကြိုက်ဆုံးစားသောက်ဆိုင်များ။ ။ - nutrigo မှကြိုတင်မှာကြားထားသည့်အသိပေးချက်များ၊ ဘလော့ဂ်အသစ်ပြောင်းခြင်းများနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်မှုအသစ်များကိုမှတ်သားထားပါ။
ဤအက်ပ်သည်ပြင်ပသိုလှောင်မှုကို အသုံးပြု၍ သတင်းအချက်အလက်များကိုဒေသအလိုက်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုမြန်ဆန်လွယ်ကူစေရန်သေချာစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Here & Now ကိရိယာသည်သင်၏အနီးအနားရှိအကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင်များကိုယူဆောင်လာရန်သင့်စက်၏တည်နေရာကိုအသုံးပြုသည်။ သင်၏ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုလုပ်ဆောင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစားသောက်ဆိုင်များနှင့်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းမှုများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်မှုကိုကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည်။
ဘာအသစ်လဲ eatigo – discounted restaurant reservations 7.0.1
Eatigo - discounted restaurant reservation app
Eatigo 1st Restaurant reservation app with Discount! (EN)
Eatigo 1st Restaurant reservation app with Discount!3(ZH)
Eatigo 1st Restaurant reservation app with Discount!2(BH)
Eatigo 1st Restaurant reservation app with Discount! (BH)
eatigo – discounted restaurant reservations 7.0
eatigo – discounted restaurant reservations 6.9.1
eatigo – discounted restaurant reservations 6.9